Hijery ny bika rehetran'ity matoanteny ity eo amin'ny Raki-bolana Volapoky eto amin'i Wikibolana
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Hijery ny bika rehetran'ity matoanteny ity eo amin'ny Raki-bolana Volapoky eto amin'i Wikibolana
by Admin Aprily 24, 2017
nosoratan'i Admin Aprily 24, 2017
Mpanoratra Patti Pauley
Vaovao lehibe mivoaka avy any Hollywood mampihoron-koditra anio maraina raha nanambara izany ny New Line American Horohoro Story ary Tovovavy farany kintana Taissa Farmiga dia kasaina hampiseho an'ity tovovavy masera ity eo am-piandrasana fatratra mba hiantsoana miodina, Ny Nun. Ny vaovao izay notaterin'i Fe-potoana, dia mahagaga tampoka tamin'ity alatsinainy-alatsinainy ity ', satria azoko antoka fa tsy nahita an'io ho avy io ny helo. Na dia izany aza dia misy dikany tanteraka satria ny Farmigas 'dia tsy vahiny The Conjuring izao rehetra izao.
Mangidy ny tatitra satria ny zokin'i Taissa, Vera Farmiga dia samy nilalao an-dry James Wan mba hiantsoana horonantsary amin'ny maha-psychic Lorraine Warren miaraka amin'i Patrick Wilson toa an'i Ed Warren. Ilay mpamorona ilay horohoro ho avy James Wan tenany, dia naneho ny hafaliany amin'ny fananan'i Taissa hiditra ao amin'ny Twitter:
Welcome @taissafarmiga ho an'ny fianakaviana! Ny tanjona dia ny fiaraha-miasa amin'ireo Farmigas rehetra. @VeraFarmiga #Ny #talentedsers https://t.co/ZlWAKbKq47
- James Wan (@creepypuppet) Aprily 24, 2017
Ny horonantsary notarihin'i Corin Hardy (The Hallow) ary nataon'i script an'i Annabelle ary Stephen King's IT Ny mpanoratra Gary Dauberman miaraka amin'i James Wan izay mipetraka amin'ny seza mpamokatra miaraka amin'i Peter Safran ihany koa no mpilalao faharoa avy amin'ny sarimihetsika The Conjuring nahazo ny teti-bolany manokana. Ary tsy dia sarotra ny mahita ny antony. Ilay Nun izay niseho voalohany tamin'ny The Conjuring 2 dia 100% no zavatra nampatahotra indrindra tamin'io sarimihetsika io. Na dia fohy aza ny fisehoana dia ampy ny nanalavitra ireo fiangonana katolika n'aiza n'aiza, ary omena ireo izay manatrika ireo sekoly hentitra tantanan'ny masera ireo ihany, nofy ratsy mandritra ny herinandro maro.
Ahoana ny hevitrao momba ny fandraisan'i Taissa Farmiga an'io anjara asa mampatahotra maoderina io? Mihainoa etsy ambany, ary mijoroa toy ny maro kokoa Ny Nun mipoitra ny vaovao!
Sary naseho: ComingSoon.net
spinoffcorin hardyGary DaubermanHoronantsarimihetsika mahatsiravinasarimihetsika mampatahotraJames WanTaissa FarmigaNy fanaovana firaisanaNy Nunny sarimihetsika maserasarimihetsika mampihorohoro ho avy
Ny sary 'Toerana Rahavavy' an'i Funko ho avy amin'ity fahavaratra ity
"Segondra 20 ho velona": mpamorona tafatafa Ben Rock sy Bob DeRosa